सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सहकारी’ | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home सहकारी खबर [Coop News] सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सहकारी’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सहकारी’
१) निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२) व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवाहरू लाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
३) सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ।
४) सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ।
५) सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
६) भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
७) लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
८) सहकारी संघ संस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल. पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्‍गारिक मल उत्पादन गरिनेछ।
९) फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।